Ka Faa'iidayso Cuntooyinkaaga Xilliga Dayrta! - Xarunta EcoTechnology
Waa wakhtigaas sanadka mar kale, marka ay maalmuhu gaabsadaan, hawaduna qabowdo. Waxaa laga yaabaa inaad ku aragto khudaar badan oo xidid ah suuqa beeralayda ama aad dareento in rabitaanka sanadlaha ah ee bocorka gaar ah uu wax uun kadiyay…
Tixgelinta 60 bilyan oo rodol oo raashin khasaar ah oo gala qashin -qubka sannad walba, waxaa muhiim ah in aan dhammaanteen kaalinteena ka qaadanno dhimista qashinka cuntada. Dabcan, qashinka waa in la bacrimiyaa halkii la tuuri lahaa, laakiin ka waran haddii ay jiraan siyaabo badan oo loo isticmaalo qashinkaas macaan ka hor intaysan ku noqon ciidda? Waa hagaag nasiib baad leedahay!
Iyadoo xilliga deyrta uu si xawli ah u socdo, waxaan u maleynay inay ahaan doonto waqti wanaagsan oo aan wadaagno siyaabaha qaar si aad uga faa'iideysato wax soo saarkaaga, dabcan.
Tufaax bislaaday oo cusub oo ku yaal asalka iftiinka
Ma kaliya ma samaysay tufaax tufaax ah ama qallafsan oo aad haysatey farabadan qolof iyo koofiyo haraaga ah? Weli ha ku shubin iyaga! Waxaa jira siyaabo badan oo loo isticmaalo qashinkaas qashinka ah, oo ay weheliso inta badan nafaqooyinka ku jira diirka (FoodPrint)
Tufaax Peel Crisps
Waqti yar iyo uunsi, qolofka tufaaxa ayaa samayn kara cunto fudud oo qurux badan! Kaliya ku tuur diirka subagga ama saliid dhexdhexaad ah ka dibna ku dar dhir udgoon kasta oo aad jeceshahay (waxaan jeclahay sonkorta qorfe iyo lowska). Ku dub heerkul ah 400 F ilaa 12 daqiiqo ama ilaa dahab ka dibna googooyo!
Tufaax diirka bourbon
Ku xidh weel jeermis dilay oo leh qolof tufaax ah iyo koofiyadaha, ka dibna ku buuxi bourbon aad jeceshahay (ama ruux kasta oo kale) oo dabool. Ku kaydi meel qabow oo mugdi ah muddo bil ah, adigoo ruxaya dhawrkii maalmoodba mar. Faleebo qurxoon ayaa noqon doonta mid toos ah oo macaan ama samee cocktails xafladeed!
Apple Cider Sirkada
ACV-ga caanka ah runtii aad ayey u fududahay in la sameeyo! Si la mid ah bourbon diirka tufaaxa, ku shub weel dhalo ah oo jeermis dilay oo ay ku jiraan jarjar tufaax ah. Ku dar qaado oo sonkor ah koob kasta oo qashinka tufaaxa ah, ka dibna ka buuxi dhalada ilaa sare oo biyo ah. Ku dabool maro-jiis ama kafeega oo lagu xidhay xadhig caag ah, oo walaaq toddobaadkii hal mar ilaa ay ka gaadhayso dhadhanka aad rabto. U hel cunto karinta oo faahfaahsan halkan!
Casiirka Tufaaxa ama Shaaha
Ku kari diirka tufaaxa iyo koofiyadaha biyo kulul si aad u hesho shaaha raaxada leh maalin qabow. Ku dar dhir udgoon oo dhan sida xabo, star anise ama ulaha qorfe si aad u hesho dhadhan dheeraad ah. Cadaadis oo ku raaxayso!
Carruurta yaryar oo xardhaya Halloween jack-o'lanterns
Ah, bocorka. Kabo qurxoon oo u dhalatay Bartamaha Ameerika. Waxay calaamad u yihiin dayrta, iyo sabab wanaagsan! Haddii aad hadda uun xardhay Jack-O-Lantern, maraq samaysay, ama aad haysato mid aad u badan oo qurxin ah, waanu ku daboolnay.
Ha tuurin miraha! Miro kasta oo isbinaajka ah ayaa loo kaydin karaa beerista sannadka soo socda ama la dubay. Si aad iyaga u badbaadiso, biyo raaci miraha oo ka sooc saxarka, ka dibna qalaji. Kadib, soo qaado kuwa ugu waaweyn (oo leh fursadda ugu fiican ee biqilka) si aad ugu kaydiso meel qabow ilaa guga iyo dubay inta kale xawaash kasta oo aad jeceshahay.
Xadhkaha dhogorta leh
Xadhkaha liimiga ah ee khalkhalsan ee abuurka ku ilaalinaya mid raaxo leh (dhicirrada, haddii aad rabto)? Samee wax ku darid qurxoon oo kaydkaaga ah. Sidoo kale waa la shiidin karaa ka dibna lagu shiidin karaa digir si aad u hesho humus macaan ama chutney.
Waxaa jira siyaabo badan oo aad ugu raaxaysato bocorka "hilibka", laga bilaabo suxuunta dhinaca la dubay ilaa maraq shiidan. Mid ka mid ah kuwa aan jeclahay ayaa ku jira curry kulul! Ma jiraan wax la mid ah baaquli kululaanaya oo ka sarreeya bariiska cusub oo leh naan. Baadhid Cuntadani ka timid Madhu's Everyday Indian waxyi!
Xitaa fikrado badan oo qashinka bocorka ah ayaa laga heli karaa halkan
diirka khudaarta ee dheriga ka samaysan ee asalka cad, xidhidh
Khudaarta khudaarta iyo dhammaan
Kaliya ma samaysay dubo weyn oo casho ah oo ma haysatid farabadan qashinka khudradda? Hal-abuur yar iyo daryeel, waxaad ka dhigi kartaa casho labaad oo macaan oo iyaga ka mid ah!
Kaydka maraq ee hadhay
Midkan waxaa mararka qaarkood loo yaqaan " maraq qashin ah," laakiin ma jiraan wax qashin ah oo ku saabsan kordhinta cuntadaada. Ka ilaali cidhifyada iyo diirka wixii khudaar ah ee ku jira weelka hawada ku jira ee qaboojiyahaaga. Markaad hesho xoqid kugu filan, si fudud ugu karkari dheri weyn oo biyo leh uunsi kasta ama udugga kale (basasha iyo toonta, fadlan) iyo milix ay u dhadhamiyaan. Qiyaastii nus saac ka dib, waxaad ka saari kartaa qashinka oo aad qasi kartaa. Ku raaxayso maraq khudradda guriga lagu sameeyo!
Haddii aad waligaa ka soo iibsatay khudaarta sida fennel, dabocase ama dabacasaha suuqa beeralayda, markaa waxaad ogtahay inay badanaa la yimaadaan caleen dushooda qiyaastii laba jeer cabbirka guluubka dhabta ah ama xididka. Halkii aad ka dhigi lahayd, u isticmaal sida aad u isticmaali lahayd geedo ama salad cagaaran! Dusha sare ee Karootadu waxay sameeyaan labbis salad aad u macaan waxaanan jeclahay ku darista dushooda dabocase ee pesto -gayga si ay u soo baxaan mid cusub oo ciid ah. Caanaha fennel ayaa si gaar ah u macaan marka lagu daro caano fadhi ama xitaa milix laga dhigay.
Cirku waa xaddidaadda qashinka khudradda, isticmaal mala-awaalkaaga oo hal-abuur samee! Marka si dhab ah laguugu sameeyo qashinka, ha ilaawin inaad compost si ay ugu soo noqdaan ciidda. Fiiri kii ugu dambeeyay blog on compoting si aad u hesho talooyin dheeraad ah oo ku saabsan bacriminta guriga!